Mpirahalahy mpirotaka - Laharana 1 ka hatramin'ny 6 | Ady, Torolàlana amin'ny lalao, Legiona | WoW Guides | WoW Guides
Mpirahalahy mpirotaka - Laharana 1 ka hatramin'ny 6
Sofia Vigo | | Combate, Game Guide, Legiona
Salama daholo. Androany izao dia mitondra zavatra tiako aho ary tsy inona izany fa ny fianadinan'ny mpiady sy ny ady farany nataon'izy ireo tany Legion. Ianareo izay efa nitsidika azy dia mbola manao izany satria tsy fantatray raha hanidy varavarana vetivety izy io, toy ny tamin'ny fotoana taloha. Ary tadidio fa ny fitsipika voalohany amin'ny Firahalalahin'ny Mpifanditra dia ny tsy firesahan'izy ireo momba ny firahalahin'ny mpiady. Manohy miafina izahay;).
The Brotherhood of Brawlers dia ao amin'ny Tram-by ho an'ny fifanarahana ary ao amin'ny Arena Liza'gar ho an'ny Horde. Azontsika atao ny mandrefy ny fahaizan'ny toetrantsika amin'ny karazana ady misy.
Mba hanombohana hiatrehana ireo fanamby samihafa dia tsy maintsy ananantsika ny fidirana amin'ny firahalalahy mpirenireny. Ho an'ity dia tsy maintsy mahazo a Fanasana voadona ra. Misy fomba maromaro ahafahana mahazo iray. Ao anatin'ireo tratra valisoa an'ny iraky ny Nosy Broken, nandresy ny sangany Vrykul hita ao amin'ny Rest of the Shield na mamita ireo tranomaizina isan-karazany ao anaty.
Ny vola lehibe hampiasainay amin'ny Brotherhood of Brawlers dia ny Volan'ny Brawler. Ireo farantsakely ireo dia hita ao anatiny Kitapon'i Brawler amin'ny alàlan'ny fandresena ny mpifanandrina amin'ny fihaonana samihafa, manomboka amin'ny laharana voalohany ka hatramin'ny fito, ao anaty kitapo ny fanafihana an-tsokosoko ary koa ao amin'ny korontana. Isaky ny eo am-pizahana ady amin'ny mpilalao hafa izahay ary mandresy dia hahazo vola fanampiny izahay Volan'ny Brawler.
Amin'ity fizarana ity dia hanazava ny laharana isaky ny ady ilaina rehetra hahatratra ny tanjontsika sy hahatratrarana ny zava-bita Mpanjakan'ny mpiady.
Miady amin'ny Oso
Lalao mora be ity. Raha hamita azy io amin'ny fomba mahomby dia mila miala amin'ny fahaiza-manao fotsiny isika Fierom-basy and of Hitsambikina Brown. Raha manao an'io isika dia ho afaka handresy azy tsy misy olana.
Miady amin'ny Dadabe Chiriflauta
El Dadabe Chiriflauta hiantso kilalao plush amin'ny loko isan-karazany ary koa hanatanteraka ny fahaiza-manao Hiran'i Chiriflauta handratra antsika masina izany Chirifláutico Cantata hanasitrana kely azy io. Ity fahaizana farany azontsika tapahina ity. Ka ny zavatra fototra amin'ity tolona ity dia ny mifantoka amin'ny famelezana ny Dadabe Chiriflauta, Mandritra ny fotoana itadiavantsika ny biby novonoina entana ary rehefa azonay atao dia hesorinay ny fahaizany Chirifláutico Cantata. Amin'izany no hamarananay azy mora foana.
Miady amin'ny oolis
Ity mpifanandrina ity dia hanao fahaizana antsoina Fanenjehana mahatsiravina haharitra valo segondra. Mandritra io fotoana io dia tsy maintsy manalavitra azy isika. Raha manana effets hafainganam-pandeha tsara lavitra isika ka tsy afaka hanatratra antsika sy handratra antsika. Ny sisa amin'ny fotoana hifantohantsika amin'ny famelezana azy mandra-pahatapitry ny farany aminy. Ady tena tsotra io.
Miady amin'ny Warhammer Council
Izy io dia misy dwarves telo izay mizara fiainana. Ny tsirairay amin'izy ireo dia hanao fahaiza-manao samihafa.
Arstad the Wild, dia hanatanteraka ny fahaiza-manao Fifandonana varatra. Miantehitra amintsika izany ary manaitra antsika ka tokony hitandrina isika.
Ulrich Valeforja, dia hanatanteraka ny fahaiza-manao tafio-drivotra. Mihodina haingana fa handratra antsika amin'ny faritra izany.
Altor Direvith, dia hanatanteraka ny fahaiza-manao Nipoaka ny lava. Hitifitra lava be dia be amintsika io, hiatrehana fahasimbana amin'ny afo. Azo tapahina io fahaizana io.
Paikady tsara ny mifantoka Altor Direvith, satria afaka manapaka ny fahaiza-manao isika. Tokony hitandrina ny puddles an'ny Sombina molten Handeha amin'ny tany izy ireo, hahafahan'izy ireo mandositra azy ireo ary koa amin'ny fiampangana izay manaitra anay mandritra ny fotoana fohy. Raha mahazo tsara izany isika dia hovahantsika haingana.
Miady amin'ny mandroboka
Ity mpanohitra ity dia fahavalo taloha izay hihaonantsika indray. Amin'ity ady ity dia mila mitandrina tsara amin'ny fahaizana isika Peck, satria raha mahavita manatratra antsika izy, dia ripaho ny fahafatesana. Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mamely azy tsy an-kijanona isika, tsy miato. Ny mpilalao Melee dia tokony hitandrina indrindra satria raha misy antony mandroboka mikasika ny rindrina, tsy ho gaga izy ary noho izany afaka mampiasa ny fahaiza-manao Peck ary vonoy eo noho eo izahay. Koa mitandrema tsara mba tsy hamela azy hanakaiky ny rindrin'ny efitrano. Ny ambiny, apetaho, apetaho, apetaho ary apetaho mandra-pahavitanao azy.
Miady amin'ny Volavola ny mpiambina
Ry malalantsika Volavola ny mpiambina (malala milaza zavatra), dia hanipy ilay fahaizana tsy tapaka Antsoy ny kifafa. Ity fahaiza-manao ity dia tsy maintsy tapahina impiry araka izay azo atao, satria arakaraka ny habetsaky ny kifafa amin'ny ady no arakaraka ny fahasimbana ho azontsika ary vao mainka sarotra amintsika ny manafoana azy. Amin'ny ankapobeny dia tsy maintsy mamely sy manapaka isika Antsoy ny kifafa. Lalao mivantana mahitsy.
Miady amin'ny Saroriak
Amin'ity fihaonana ity Saroriak hampiasa fahaiza-manao efatra, Rindrin'ny afo, Ahintsana ny lelafo, Fitaovam-piadiana mafana, Baomba afo y Pyroblast. Tokony hitandrina tsara isika Rindrin'ny afo, satria handefa mandà meteor amin'ny lafiny telo izay tsy maintsy hivoahantsika alohan'ny hikatonany, satria raha mahavita mamely antsika izy dia ho faty tsy azo sitranina isika. Ny fahaiza-manao hafa tokony hotadidina dia Pyroblast, fa tsy maintsy manapaka imbetsaka araka izay tratra isika. Ny sisa amin'ny fotoana dia hanao Dps betsaka araka izay tratra mandra-pahatapitry ny farany aminy isika.
Miady amin'ny Master Paku
Raha vantany vao nanomboka ny fivoriana, ny Master Paku mizara telo izy io ary lasa karazana tabilao lalao ny faritra misy ny ady. Hanomboka handeha tsy tapaka isika ary tokony hitandrina mba tsy hikasika na hanandrana hiampita ny rindrin'ny labyrint raha tsy izany dia ho faty eo noho eo. Tsy maintsy resintsika ireo kopia telo izay ho hita mihodina tsy tapaka miaraka amin'ny fahaizany Daka mihodina, manerana ny faritra ady. Ny fahasarotana dia misy fiantraikany amin'ny mozika indrindra satria ny fahaiza-manao dia manimba antsika be loatra raha mikasika antsika. Afaka manala Daka mihodina mandritra ny dimy ambin'ny folo segondra dia tsy maintsy manangona isika Zen Orb, izay karazana faritra mavo izay hiseho manerana ny faritry ny ady. Mandritra io fotoana fohy io dia tsy maintsy araraotintsika ny fanaovana ny simba indrindra azo atao.
Amin'ny voalohany dia toa sarotra be izany, fa rehefa mahazo azy isika dia afaka mamita ny tolona mahomby ary mandeha amin'ny laharana telo.
Miady amin'ny Deathfin
Ady tena tsotra izany nanomboka teo Deathfin tsy manao fahaiza-manao. Ka hazakazaka Dps fotsiny mankany amin'ny fahafatesana, alohan'ny hamonoany antsika.
Miady amin'ny mitsimoka
mitsimoka Slug mainty izy io ary amin'ity ady ity dia hampiasa ny fahaiza-manao Division, izay hahatonga azy hizara ho slugs bebe kokoa izay hiadana kokoa ny fihetsik'izy ireo. Tsy maintsy esorintsika ny slug tany am-boalohany ary tsy hiraharaha ireo kopia. Raha mpilalao mozika isika dia tokony hitandrina tsara amin'ny kopia satria raha mikasika antsika izy ireo dia hanimba be antsika, noho izany tsy maintsy mihetsika tsy tapaka amin'ny efitrano isika. Tokony hitandrina ihany koa isika mba tsy hanitsaka Mandrotsaha fahamarinana sisa tavela amin'ny tany rehetra io. Ny ambiny kosa dia ny fanaovana ny simba rehetra mandra-pahavitany azy.
Miady amin'ny Shadow Master Aameen
El Shadow Master Aameen hanatanteraka matetika ny fahaiza-manao Fanilo aloka. Izany dia hiteraka fanilo alokaloka hiseho eo amin'ny toerana misy anay rehefa tapitrao ity famoahana ity fahaizana ity. Ity fanilo ity dia hipoaka amin'ny faritra kely ary raha mahatratra antsika izy dia hamono antsika. Manomboka amin'io fotoana io, ny fanilo vaovao izay miseho dia handefa a Fipoahana aloka izany dia hamakivaky ny sisa fanilo izay ao amin'ny faritra ady. Tsy maintsy hifindra any isika Shadow Master Aameen avela any aoriana ny fanilo mba tsy handratra antsika rehefa mipoaka izy ireo. Ny ambiny amin'ny fotoana dia tsy maintsy ataontsika ny simba rehetra mety ary hamita azy io araka izay haingana indrindra.
Miady amin'ny Jhonny Phen scenario
Johnny Freak Mpihaza izy ary hiaraka mandritra ny tolona ataon'ny biby fiompy, Fulgor. Tokony hitandrina tsara amin'ny fahaizany roa isika amin'ity fivoriana ity, Salva y Tifitra mahery.
Durante Salva, Johnny Freak Hametraka ny toerana misy antsika amin'ny faritra zana-tsipìka izay hianjera tsy tapaka, noho izany dia mila miala amin'izy ireo isika raha tsy te-hahazo fahavoazana fanampiny.
Tifitra mahery io no fahaizanao manandanja indrindra. Amin'ny fotoana anipazany azy dia tsy maintsy mametraka ny tenantsika lavitra azy isika ary tsy maintsy mahazo ny biby fiompy, Fulgor, hamakivaky ny làlan'ny Tifitra mahery ary isika. Raha azontsika izany, Johnny hamono ny biby fiompinao izy ary hanangana azy io indray. Amin'izany fotoana izany dia hanararaotra hanao ny fahavoazana rehetra azo atao isika.
Tsy maintsy mitandrina amin'ny fiainantsika isika satria be ny biby fiompy. Raha manao ny zava-drehetra tsara isika dia hamarana azy tsy misy olana lehibe.
Miady amin'ny Calculé
Ity ady ity dia tena miavaka ary tsy mitovy amin'ny efa mahazatra antsika. Calculé ho ao ambadiky ny efitrano izy ary hijanona, tsy hanafika antsika izy raha tsy manatona azy isika. Tsy hanan-kery tanteraka amin'ny fahaiza-manao ataontsika aminy izany afa-tsy ny mitondra a Ampinga rano Fivarotana tsena. Raha vantany vao manomboka ny tolona dia hisy afo mirehitra. Tany mandoro ary rahona rahona sasany no hanambara ny làlana tokony harahintsika. Raha manitsaka ny afo isika dia ho faty, ka tsy maintsy manaraka tsara ireo làlana misokatra ary manandrana mahazo Orb rano, izay hiseho tampoka amin'ny faritra rehetra amin'ny efitrano. Raha vantany vao manana izany isika dia hametraka ny Ampinga rano ary afaka manao fahavoazana betsaka araka izay tratra isika Calculé tokony ho dimy ambin'ny folo segondra. Amin'ny fananana ny Ampinga rano satria afaka manitsaka afo ihany koa isika, amin'izay dia ho mora kokoa ny mamely azy. Raha tsy maika hidirika sy hanao ny zava-drehetra tsara isika dia hamarana vetivety ity mpanohitra ity.
Miady amin'ny Bakso
Ilay namantsika Meatball manafika indray. Amin'ity ady ity dia tsy maintsy manitsaka toeram-pitrandrahana volomparasy izay mivoaka amin'ny tany isika ary miaraka amin'izay koa mandratra ny mpanohitra antsika. Amin'ny fanitsahana azy ireo, dia hahazo tombo-kase isika mba hanimba bebe kokoa. Tsy maintsy manangona azy ireo mandritra ny tolona isika ary manangona fahasimbana, na dia tsy mijanona mamely azy aza isika. Raha maharitra ela isika dia ho tezitra izy TEHITRA NY MEATBALL! ary hamono antsika io.
Miady amin'ny GG Engineering
Injeniera goblin roa izy ireo izay mizara fiainana. Tsy maintsy mifantoka amin'ny famelezana ny goblin izay ivelan'ny sehatry ny fiarovana isika rehefa manao Teleportation vonjy maika. Ilaina tanteraka ny fanaovana raffle Baribato balafomanga Goblin hitondra fahavoazana be dia be ho antsika izany raha mahavita manatratra antsika. Tokony hiezaka ihany koa isika hahatonga ireo balafomanga ireo hianjera amin'ireo goblin ary hahazo fahasimbana fanampiny. Amin'ny fanaovana izany rehetra izany sy ny fisorohana ny sisa amin'ireo fanafihana dia afaka mamarana azy ireo isika.
Miady amin'ny hevitra
Raha vantany vao vita ny ady, hevitra hametaka azy Rot Aura izany dia hitera-doza bebe kokoa rehefa ao anaty isika. Hanangona marika isika rehefa mandeha ny fotoana, mahazo fahasimbana bebe kokoa hatrany. Raha mahatratra folo ireo marika ireo dia ho faty eo noho eo isika, izany no isan'ny isaky ny marika efatra na dimy tsy maintsy hialantsika amin'ilay faritra hamerenantsika azy ireo. Hisarika antsika indray ny isa Point Hook.
Miady amin'ny Sonny sy wes
Amin'ity ady ity dia mila mitandrina isika amin'ny fahaiza-manao roa izay hifandimby.
Rush! izay andry feo no hiseho ao amin'ilay efitrano tsy maintsy hialantsika.
Onjam-peo, sakana sasany izay hiseho eo amin'ny haavon'ny tany. Tokony hitsambikina izy ireo hialana amin'izy ireo ary tsy hahazo fahasimbana be.
Mandritra ireo fahaiza-manao roa ireo, Sonny hanatanteraka ny fahaiza-manao May izy io, ary mandrotsaha baolina afo izay hampihena tsikelikely ny fiainantsika. Azo tapahina io fahaizana io. Mandritra izany fotoana izany, Wes hanatanteraka ny fahaiza-manao Mipetraha, fa tsy maintsy manapaka na mijanona amin'ny fomba rehetra azo atao isika, satria raha alefa ity fahaiza-manao ity dia hipetraka ny toetrantsika, tsy azo ovaina mandritra ny segondra vitsy ary tsy afaka misoroka ny tsanganana sy ny sakana amin'ny feo. Hatramin'ny fahaizana Sonny tsy dia misy akony amin'ny adintsika io, ilaina ny mifantoka indrindra Wes hamita azy haingana araka izay tratra.
Ankoatr'izay, mandritra ny ady, mpandihy marobe no hiseho fa tsy tokony avelantsika hangonina izy ireo satria hanakana antsika araka izay azo atao izy ireo ary tsy maintsy resintsika izy ireo amin'ny fahasimban'ny faritra.
Miady amin'ny razorgrim
Ny hany fahaizan'ity antsantsa ity dia ny tsanganana anoloana izay havoakany rehefa mihetsika sy manao fampisehoana Churn. Amin'ny alàlan'ny fifindrana mankany amin'ny sisiny na ny lamosiny ary hialana amin'ity tsanganana ity dia afaka mamarana ny ady isika.
Miady amin'ny Pulgoso Quintet
Amin'ity ady ity dia hiatrika gnome dimy voaroaka isika amin'ny fotoana iray. Tokony hitandrina tsara isika rehefa manao ilay fahaiza-manao Loha-boka, satria hangonina ny fahavoazana ary hihena be ny fiainantsika. Hofoanantsika ny gnome amin'ny alàlan'ny gnome, handresy azy ireo amin'ny fotoana fohy indrindra. Zava-dehibe ny mampikatso ireo gnome ireo amin'ny fomba sasany hisorohana ny fahafaha-miavona imbetsaka sy manasarotra ny ady.
Miady amin'ny Havoana mainty
Amin'ity ady ity dia tsy maintsy jerentsika ny fiarahan'ny tafondro rehetra niseho nandritra ny fihaonana. Raha vantany vao tonga any amin'ny barika ny wick miaraka amin'ny lelany mifanitsy aminy dia tsy maintsy mihetsika isika mba tsy hahazo fahasimbana, satria raha mahazo basy tafondro dia ho faty eo noho eo isika. Inona koa, Havoana mainty hanatanteraka ny fahaiza-manao Ho an'ny carrrrrrga! ary tsy maintsy mihataka isika mba tsy hanipazany antsika any amin'ny habakabaka. Ny ambiny dia ny fanaovana simba betsaka araka izay tratra mba hamaranana azy faran'izay haingana.
Miady amin'ny Topps
Izy io dia tandroka mahatsiravina izay handrava izay rehetra tratrany eo alohany. Tsy maintsy miala eo isika rehefa manao Fanafihana Jurassic satria hitaky vola izy io ary raha eo amin'ny làlany isika, dia ho faty eo noho eo. Rehefa misaraka isika, Topps hianjera amin'ny rindrin'ny efitrano ary handray Hetsika Jurassic. Mandritra io fotoana io dia gaga izy, azontsika atao ny manisy ratsy azy satria hahazo dimampolo isan-jato mahery izy. Tokony hotadidintsika izany Topps ho gaga ianao amin'ny fotoana voalohany andoavanao vola, dia mila roa ianao Fanafihana Jurassic hiditra Hetsika Jurassic ary toy izany ny manampy boribory ny Fanafihana Jurassic isak'izao mihetsika izao. Tokony hitandrina ihany koa isika hikapoka azy eo anilany mba tsy hanaitra antsika rehefa mampiasa ny rambony izy. Raha raisina ireo hetsika roa ireo dia ho mora ny mamita azy.
Miady amin'ny Millie Watt
Amin'ity fivoriana ity dia tsy maintsy jerentsika ireo fahaiza-manao roa ireo.
Dynamite elektrika, izay hamela puddles elektrika izay tsy maintsy hialantsika.
Megafantastic Decombobumorphator, izay manana mpilalao lava be ary hialana amin'ny fidirana amin'ny puddle elektrika vokarin'i Dynamite elektrika eo alohan'ny hamaranana azy amin'ny fandefasana azy, raha tsy izany dia hamadika antsika ho akoho robot ary ho faty amin'ny farany isika.
Lalao mivantana mahitsy.
Miady amin'ny Carl
Miankina amin'ny Dps fotsiny io ady io. Isaky ny dimy ambin'ny folo segondra Carl Hanangana baolina lava any amin'ny fivoriana izy io, izay rehefa mamely ny tany, dia hamorona rindrina afo efatra izay hitety ny efitrano iray amin'ny lalana efatra samy hafa izay tokony hialantsika. Ny faritra nahavoa ity lava lava ity dia mbola hirehitra hatrany, ka raha misy lava lava hafa mahavoa eo akaikiny ary mandehandeha eo aminy ny tadin'ny afo, dia halefa indray ilay teo aloha ary handefa rindrina afo efatra hafa. Tokony hamita faran'izay haingana araka izay tratra isika Carl mba tsy hanangonan'izy ireo sy rojo rindrina afo be loatra izay hiafara amin'ny famonoana anay sy hanimbana ny tolona.
Miady amin'ny ogrewatch
Ity ady ity dia fanoherana ny lalao Overwatch. Ny zavatra voalohany tokony hataontsika dia ny fanafoanana ny Tetikasa barazy de Hudson miaraka amin-katezerana. Avy any isika dia hanana valopolo segondra hamaranana azy dupree alohan'ny handefasana azy Irery manoloana ny loza, fa raha vita ny fandefasana azy dia hamono antsika eo noho eo izy. Raha tsy mila miala amin'ny toeram-pitrandrahana izay apetrany isika kabun ary ny fanafihana an'i Hudson miaraka amin'ny tafondro Tesla, izay azontsika tapahina. Rehefa avy namono dupree tsy maintsy hamaranantsika ireo mpanohitra hafa izay manao fahavoazana betsaka araka izay azo atao satria ady mafy io.
Ary hatreto dia ny torolàlana manomboka amin'ny laharana 1 ka hatramin'ny 6 an'ny Brotherhood of Brawlers. Mirary soa amin'ny lalao misy anao ary hahita anao amin'ny manaraka.
Lahatsoratra manaraka: Mpirahalahy mpirotaka - Laharana 7 - Vita sy valisoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Game Guide » Mpirahalahy mpirotaka - Laharana 1 ka hatramin'ny 6
Fisehoana izay hijanona aorian'ny Legiona
Pets fampiroboroboana - Fizarana 3